दशैंमा कसरी गर्ने सुरक्षित यात्रा ?
एउटा भनाई छ– ‘हतार गरे भन्न सकिन्न, विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ’। चाडपर्वमा अरु बेलाको तुलनामा सडकमा सवारीसाधनको चाप बढी हुन्छ।
दशैंमा राजधानीबाट ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु घर फर्किने भएकाले सवारीसाधनको चाप सडकमा अझ बढी हुन्छ। सडकमा जति यात्रु र सवारीसाधनको चाप बढ् त्यति नै बढी दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ।
यो समयमा सकेसम्म सबै क्षेत्रबाट सुरक्षित उपाय अपनाउन आवश्यक हुन्छ। ट्राफिक प्रहरी, स्वयमसेवक, यात्रु, सवारी चालक तथा सम्बन्धित निकायले सडक सुरक्षाबारे विशेष ध्यान दिनैपर्छ।
चाडपर्वका समयमा सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना हुन्छन्। यो चुनौतीको सामना गर्न सरकारी निकाय र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय तथा हातेमालो आवश्यक छ। नेपालका सडकहरु जोखिमपूर्ण छन्। अझै पहाडी क्षेत्रका सडकको अवस्था अझै बढी जोखिमपूर्ण छ। किनभने नेपालका सडकहरु आफँैमा जोखिमयुक्त छन्।
चाडपर्वका समयमा सडक दुर्घटना कम गर्न लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनमा चालक परिवर्तन गरिएको छ कि छैन? त्यो कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ। चालकहरुले पैसा कमाउने सिजन भन्दै घण्टौँसम्म सवारी चलाउने गरेका हुन्छन्। चालकको निद्रा र थकानका कारणले पनि सडक दुर्घटना हुनसक्छ।
नेपालका अधिकांश दुर्घटना चालकका कारण भन्दा पनि सडकका कारण हुने गरेका छन्। अर्को कुरा नेपालका अधिकांश सडकहरु स्थानीयहरुले बनाएका सडकहरु हुन्। त्यसैले सवारीसाधनको चाप धेरै हुने वित्तिकै सडक भत्किने र दुर्घटना बढ्ने सम्भावना प्रवल हुने गर्दछ।
दुईतिहाइ सडक मापदण्ड विपरीत
नेपालको समग्र सडक भनेको ८५ हजार किलोमिटर छ। ८५ हजार किलोमिटर सडकमध्ये २७ देखि २८ हजार किलोमिटर मात्र सडकको निर्माण सडक विभागले गरेको छ। जसमा न्यूनतम मापदण्ड पुगेको छ। सडक विभागले बनाएको सडकमै पनि इञ्जिनीयरिङको मापदण्ड पुगेको छैन। त्यसभन्दा बाँकी रहेको सडक पनि स्थानीय तहले बनाएका छन्। जसमा इञ्जिनीयरिङको मापदण्ड पुगेको हँुदैन त्यस्ता सडकमा दुर्घटनाको जोखिम रहन्छ।
अन्य देशको तुलनामा हाम्रा सडकहरुको डिजाइनको हिसाब उस्तै भएपनि संरक्षणको नभएकाले दुर्घटना जोखिम बढेको हो। जनचेतना र अनुशासन को पालना हुँदैन। त्यसैले सडक संरचना कमजोर भएकाले नै दुर्घटना पनि बढी हुने गरेको छ।
उदाहरणका लागि भन्ने हो भने पृथ्वी राजमार्ग सडक बर्षोदेखि त्यहाँको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। हरेक वर्ष पहिरो गएर बाटो अवरोध कायम नै छ। अर्बभन्दा बढी खर्च गरिएको सडकको त त्यो हाल छ भने अन्य सडकको गति कस्तो होला? यस्ता सडकमा हामी दिनहुँ यात्रा गर्न बाध्य भएका छौं।
अझै पनि सडकको वारपारमा नालीहरु खुला छन्। मोडहरुमा साइडमा बार रेलिङ लगाइएको छैन। सडकमा सडक स्याप्लहरु राखिएको छैन। सडकहरु संरचना नै गलत ढङ्गले बनाइएको छ। सडक पैदल यात्रु मैत्री बनाउने पर्नेमा सवारीमैत्री मात्रै बनाइएको छ। जसले गर्दा पैदल, साइकल यात्रीहरु र मोटरसाइकलमा धेरै दुर्घटना बढेको छ। हाम्रा सडकहरु दुई तरिकाले निर्माण गरिएको छ।
हाइ–वे सडक र सवारी सडक भनेर छुट्याइएको हुन्छ। सवारी सडक विशेषगरी पैदल यात्रुमैत्री हुन आवश्यक छ भने फुटपाथ ठूलो हुनुपर्छ। त्यस्तै मोटरसाइकल, साइकल लेन र जेब्रा क्रसिङको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै हुन जरुरी छ। सवारीसाधनका लागि छुट्टै लेनको हुन आवश्यक छ। हाम्रा सडकहरु सम्रगमा प्रायजसोः १० एक्सल रोडमा बनेका छन्।
अर्को हाइ–वेका लागि कम्तिमा दुवै लेन ७ मिटरको अनिवार्य हुनुपर्छ। हाइ–वे सडकमा नाली छोपिएका ठाउँमा सवारीसाधनका लागि सवारी संकेतहरु राखिएको हुनुपर्छ। तारजालीका साथै रेलिङ बारहरु राखिएको हुनुपर्छ। नेपालमा सवारीसाधन मैत्री सडक कुनै पनि छैन।
जापान सरकारले बनाएको सिन्धुली बर्दिबास सडकखण्ड (वीपी राजमार्ग)सडकको डिजाइन ४.७५ मिटरको छ। हुन त त्यो सडक कृषिजन्य सामान ओसारपसारका लागि साना सवारीसाधन गुड्नका लागि बनाइदिएको हो। तर अहिले ठूला सवारीसाधनहरु गुड्ने भएकाले सडकको अवस्था संकुचन हँुदैन, संरचना बिग्रिँदै गएको छ।
एउटा सडक कम्तिमा ७ मिटरको भयो भने बल्ल सवारीसाधन गुड्नका लागि उपयुक्त हुन्छ। अर्को कुरा, सडकसँग जोडिने भनेको सवारीसाधन हो। सडक आफँैमा दोषी हँुदैन, सवारीसाधनको मुख्य हात हुन्छ। सवारीसाधनको पटक्कै अनुगमन हुँदैन। चालकले कति समय सवारीसाधन चलायो भन्ने कुनै रेकर्ड आजसम्म कतै छैन।
अहिले प्रविधिको विकास भइसकेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर सडक सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक छ। अहिलेका धेरै जसो युवा चालक छन्। युवाहरुमा धेरै गाडी चलाएको अनुभव हुँदैन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यस्ता चालकहरुलाई तालिमको व्यवस्था छैन। राज्यले यस्ता साना÷साना कुराहरुमा ध्यान दिने सकेमा सडक दुर्घटना हुनबाट बच्न सकिन्छ।
काठमाडौंका सडक पैदल यात्री मैत्री भएनन्
पछिल्लो समयमा काठमाडौंका सडकमा विगतको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ। काठमाडौंकोे सडकको समस्या के हो भने सवारीसाधनका लागि मात्रै सडक बनाइयो। खासमा हुनुपर्ने चाहिँ पैदल यात्रु मैत्री हो। त्यसैले काठमाडौंमा सवारी दुर्घटना र सवारी जाम बढ्ने गरेको छ।
सडकमा पैदल यात्रुहरु सुरक्षित छैनन्। मोटरसाइकल यात्रीहरु सुरक्षित हुन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण भनेकै सडक पैदल यात्रुमैत्री नभएर हो। चीनको लगानीमा निर्माण गरिएको सातदोबाटो–कलंकी सडकलाई ‘फाष्ट एक्सप्रेस’ भनिएपनि पैदल यात्रुमैत्री हुन सकेन। जसका कारण दुर्घटना बढेको छ।
(लेखक ट्रन्सपोर्ट एण्ड ट्राफिक इञ्जिनीयर हुन्)
Published Date: Thursday, 3rd October 11:07:38 AM